Nokianin’ny Masoivoho Amerikana i RAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
Nokianin’ny Masoivoho Amerikana i RAJOELINA
Fanambarana nataon’ny Masoivoho Amerikana momba ny fanapahan-kevitry ny CENIT sy ny Firenena Mikambana
Fanosihosena sy fandikàna ny andininy faha 10 ao amin ny tondrozotra ny endrika fanerena rehetra mikendry hanova ny fanampahan-kevitra noraisin ny CENIT sy ny Firenena Mikambana hoy Etazonia. Heveriny fa tsy anjaran’ny mpanao politika ny mibaiko ny fomba fiasan ny CENIT.Tsy tokony hiverenana intsony, hoy izy, ny fifidianana tamin ny taona 2010 izay tsy nankatoavin izao tontolo izao.Tokony hampitsahatra ny fihetsika na fiteny mety hanohintohina ny fahaleovantenan’ny CENIT amin ny asa teknika ataony Andriamatoa Rajoelina.
FANAMBARAN’NY MASOIVOHO AMERIKANA
Miantso ny governemanta Amerikana !
Auteur Solo Razafy*Publié le 11 février 2013 Catégories Politique
10 pensées sur “Nokianin’ny Masoivoho Amerikana i RAJOELINA”
Tena tsara sy mety ny nahatongava’o fitsikerana io izao , satria rehefa avy nahazo daka t@ fihemoranan’ny datim-pifidianana sy ny tsy fahobiazan’ny dia nandaniana ny valom-bahoaka tany NewYork, dia afa-baraka indray fa ilay Zanank’i Dada nolazaina fa 300 dia efa ho 5 alina mahery. Izao indray nahazo ny tsikera ny amerikanina..
Saingy , hitako tsy ampy foana anefa izany satria mbola mijoro ny mpanogam-panjakana, ary nieboebo hoy mahery ny diplomasiany ka nekena ho filohan’ny tetezamita izy.
Manotany kosa aho hoe mba afaka manao zavatra mivaigana ve ny amerikanina, ohatra ny fampiaharana ilay sazin’ny 109 any Etazonia ?
Mila hetsika mananaraka ihany koa ny zanak’i Dada. Satria tsy maintsy karakaraina izao fa mivoraka.
Ka tsy mahita fivonona matanjaka avy @ ra-malagasy angamba ny bekintana satria mafy loatra ilay ngezan’ny francophonie,ka matahotra hiova fomba fijery, fisainana sy fiasa i ra-malagasy, izay namela irery ny filoha M.Ravalomanana nanomboka 2002 ka hatrizao.
Efa mba 2013 anefa dia mbola mihesona be anaty francophonie.
Raha mbola tsy mahasahy mi-japy izao dia …hafoizo tanteraka ny efa mba natomboky ny filoha M.Ravalomanana
Ny tena vahoaka Malagasy efa tena leo tanteraka ny Frantsay ry Balita a!
fa ireto kentsony maivan-doha mpivarotra tanindrazana tahakan-dry rajoelina no mbola minono amin´ny frantsay.
zaran´ny vahaoka Malagasy leo frantsay sy frantsa afrika, ny miaraka amin´ny firene-kafa tahaka ny Amerikana.
Ampy ny vonomoka sy fanandevozana ary fangalarana ny harem-piren´ny mlagasy naton´ny Frantsay izay.
Nomen´n frantsay anarana hoe, Mal gache isika gasy amin´izay dia hoe, manaiky isika fa isika ihany no nanimba ny firenentsika, nefa ny frantsay efa elabe no nanonedrana ny harem-pirenetsika, ohatra i Madagasikara anie, nosy maintso, nanana harenab mihitsy , izao , ho ritra ny hazo, ho ritra ny harena, mbola tiany alaina ny sisa.
Ireo basy miparitaka sy ireto miaramila kely saina manao milisy manohana ny mpanongam-panjakana ireto ihany ny olana, fa raha tsy izany , tsy mila Frantsay mitsabaka sy mamatsy fitaovam-piadiana, hitsentsitra ny Nosy Madaasikara , ny tena vahoaka mlagasy.
11 février 2013 à 21 h 16 min
Sady mampalahelo no mahamenatra ireto mba hoe
zanak’i dada ao @ ity fitondrana an!!!MAHONENA!!!fa toa ny
hafa indray no sarotiny amintsika,mialà tao ray olona rehefa tsy hanano a!
Mba misy mihaiiiiiiiiiiiino va ianareo ry Misajaona sy ranavalona ??
Madagasikara dia nosy milay, ary ny toerana misy azy eo anivon’ny Océan Indien koa dia torak’izany ! Fa ny tompon-tany no tsy …….mamely ê !
Ny hafa marina indray ity no sarotiny, araky ny voalazan-dranavalona ! Atramin’izao mbola tsy tonga saina daholo !
Eo ireo faly milaza fa « tsy hisy fifidianana raha tsy tonga i Dada » ! Tsy fantatr’izy ireo fa ireo mpanongana anie dia faly amin’ny tsy fisian’ny fifidianana fa mody paiso fotsiny ê ! Indrindra fa ilay domelina !
Eo izy na zato taona aza, satria « efa vita sonia ny soratra », mba tsy hilazàna hoe « fanambadiana ».
L’article 31 de la feuille de route stipule que « Aucune procédure d’empêchement OU DE DESTITUTION DU PRESIDENT DE LA TRANSITION, ni aucune motion de censure à l’endroit du Gouvernement de Transition, ni aucune mesure de dissolution du Parlement de Transition ne peuvent être exercées pendant la Transition ».
Na Mpanjaka aza mbola azo hahongana ! Hoy koa ilay ranamana iray izay fa na i Hitler aza tsy nahazo na nomena fahefàna tahak’izao !
Koa inona intsony no azo antenaina ? Ny vahoaka tompon’ny fahefàna sy tompon-tany toa tsy mahafantatra izay abidian’ilay raharaha akory ! Eo ireo voky lalitra, ary eo ireo izay mahafantatra tsara ny fandehany, fa misitrika any anaty fandriana mba tsy andraisana andraikitra !
Fifidianana amin’ny 24 jolay izany, dia tsy hisy akory !! Ny fantatra fa misy, dia mihapotika ny Firenena isaky ny mihiratra maraina ny masoandro !
Tena mba nandinika lalina aho, fa na frantsay na amerikan => Buzness Plan, samy manana ny ankolafiny reo e, ny amerikanina nge ef ela no fantatra fa tia an ny filoha teo aloha e satria iny no nazahony tombtsoa…DIA te amingapingana ny fitondrana ef mijoro…mplhl hoe atao anzao foana ny tanora vao mihetsika fa ny antitra ef goaika foana.
Vive TGV 🙂
Felana dit :
13 février 2013 à 13 h 03 min
Mendrika > ts mety zany waaaa alefaso lavitra ny sainareo fa jamban’ny vola !!!!!
ZAY TGV 🙂
BandiMisaina dit :
13 février 2013 à 13 h 29 min
Manana ny fireneny ny Amerikana ka tokony any aminy aloha no tokony hojereny sy ho alaminy mialoha fa tsy ny firenena mijoro sy mahaleo-tena aty no hijabajabahany ! Madagasikara angeh ka tsy i IRAQ ka ndeh ho ampiadina sy ho potehina eto eh !
Bakoly keli dit :
13 février 2013 à 13 h 36 min
BandiMisaina >> Tsy mendrika anao le pseudo ! zany ve enao no misaina ! hita zao fa eo milaza fa mananjà ny fiandrihanam-pirenena, avy eo mierà any an-dafy de tsy ai tsony na mandainga na ampandaingana ko inon ! Satria ko tsy tianareo no atao aotran’i Iraq de aleo ataon’ny FRANCE otran’ny any MALI eh
13 février 2013 à 14 h 08 min
Andana mifidy daholo
Précédent Article précédent : La mafia du Bois de Rose
Suivant Article suivant : TSY MAINTSY MIJORO NY ANKOLAFY RAVALOMANANA